Vaovao - Foara Jiro any Hong Kong(HK).
Hong Kong(HK) Lighting Fair dia iray amin'ny tsenan'ny jiro lehibe indrindra eran-tany izay manome fahafahana ara-barotra midadasika ho an'ny fampirantiana sy ny mpividy, ary nijanona ho iray amin'ireo hetsika ara-barotra lehibe indrindra amin'ny karazany indrindra indrindra amin'ny indostrian'ny jiro hatramin'izao.
Ny tsenan'ny jiro HK dia manana traikefa an-taonany maro ary manam-pahaizana manokana amin'ny fikarakarana fampirantiana ara-barotra amin'ny indostrian'ny jiro.Malaza eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izy io noho ny zava-bitany miavaka amin'ny fanampiana ireo mpampiasa vola hikaroka ireo fahafaha-manao fandraharahana.
Ny Hong Kong International Lighting Fair dia mazàna ahitana ny karazana jiro rehetra toy ny jiro LED & maitso, jiro ara-barotra, jiro dokam-barotra, tokantrano ary karazana jiro hafa rehetra;Ny tsenan'ny jiro ihany koa dia mandray ny kojakoja jiro, ny kojakoja sy ny fampirantiana.
Ny fampirantiana ara-barotra dia nanome antsika ny sehatra tsy manam-paharoa izay ahitana ny fampirantiana sy ny mpividy mijery ny fandraharahana.Ny tsenan'ny jiro HK dia hetsika manerantany izay handraisana ny mpividy sy ny fampirantiana avy amin'ny firenena sy faritra samihafa.Ny toerana dia toerana milamina sy mety izay manome tontolo tonga lafatra izay ifanakalozan'ny fampirantiana sy ny mpividy ny raharaham-barotra, ny fifanakalozam-baovao momba ny tsena farany ary ny fifandraisana amin'ny orinasa.
Efa an-taonany maro izao no nandray anjara tamin'ny Foara Fahazavana Iraisam-pirenena Hong Kong izahay saingy nijanona tamin'ny 2020 noho ny COVID-19.Tongasoa eto aminay amin'ny manaraka any HK.